FAQs - Beijing Stelle Laser Technology Co., Ltd.
Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama shirkad ganacsi?
Beijing Stelle Laser waa soo saaraha laser diode, IPL, ND YAG, RF iyo mashiinnada quruxda badan ee shaqada.Warshadayadu waxay ku taal magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha.
Intee in le'eg ayay u baahan tahay dhalmada?
Lacag bixinta ka dib waxaan u baahanahay 5-7 maalmood oo shaqo si loo soo saaro iyo tijaabiyo, ka dibna sida caadiga ah waxaan ku soo rarnaa DHL ama UPS macmiilka, dhoofintu waxay qaadataa qiyaastii 5-7 maalmood si ay u timaado albaabka macmiilka.Markaa waxay gabi ahaanba u baahan tahay 10-14 maalmood macmiilku wuxuu heli karaa mishiinka lacag bixinta ka dib.
Ma dhejin kartaa summadayda mashiinka?
Haa, waxaan siinaa adeeg LOGO bilaash ah macmiilka.Waxaan ku dhejin karnaa astaantaada mashiinka mashiinka bilaashka ah si aan uga dhigno mid aad u sarreeya.
Ma bixisaa tababar?
Haa hubaal.Mashiinkayaga waxaanu kuugu soo diri doonaa buug-gacmeed tafatiran oo leh cabbirro lagu taliyay, si xitaa bilawga u isticmaalo si fudud.Dhanka kale waxa aanu sidoo kale ku haynaa liiska muqaalka tababarka ee kanaalkayaga YouTube.Haddii macmiilku wax su'aal ah ka qabo isticmaalka mishiinka, maareeyahayada iibka ayaa sidoo kale diyaar u ah inuu sameeyo tababbarka wicitaanka fiidyowga wakhti kasta macmiilka.
Waxaad ku bixin kartaa lacag bixinta akoonkeena bangiga T/T, Western Union, Payoneer, Alibaba, Paypal iwm.
Waxaan bixinaa dammaanad bilaash ah 1 sano iyo adeegga iibka ka dib.Taas oo macnaheedu yahay, 1 sano gudaheed, waxaan ku siin doonaa qaybo dheeri ah oo bilaash ah oo aad u baahan tahay, waxaana bixin doonaa kharashka dhoofinta.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh.Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa xirmo khaas ah oo kiis duulimaad ah mashiinadayada, gudaha oo leh xumbo qaro weyn si aan si fiican u ilaalino.